SONATA-CANTATA: ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူးခရီး (၉) လုမ္ဗိနီ
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုကို ကိုယ်တိုင်မရောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် မမသီတာတို့ကျေးဇုးနဲ့ ရောက်ရှိခဲ့သလို အင်ကြင်းပန်းကိုလဲ မြင်ဖူးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အနီရောင်အပွင့်တွေလို့ထင်မှတ်ထားတာ ခုတော့ရှင်းသွားပါပြီ
ဒီပို့ စ်လေးတွေအတွက်ကျေးဇူးပါဆရာ. သွားမယ်လို့ ရည်ရွယ်ပြီးမသွားဖြစ်သေးခင် ဒီပို့ စ်လေးတွေကတဆင့်အသေးစိတ်လေ့လာလို့ ရလို့ ပါ
မသီတာရေ...စာလာဖတ်တယ်.မငုံ သဘောကျတဲ့နေရာဒေသတခုဖြစ်လို့ ဒီခရီးစဉ်လေးအကြောင်း လာလာဖတ်နေဦးမယ်.
မငုံလဲ အရင်က အင်ကြင်းပန်းပင်ကိုသေချာမမြင်ဖူးဘူး။ ဗမာပြည်မှာ တွေ့ဖူးတဲ့အပင်ကြီးနား ပုံပါအတိုင်းပေါ့နော် အဲအပင်ပုံစံကိုတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတကျောင်းမှာ တွေ့ဖူးတယ်.. မငုံတို့ရှမ်းပြည်မှာ အပင်တော့မမြင်ဖူးဘူး. (နောင်ကြုံ၇င် ပုံတင်ပြီးဝေမျှပါဦးမယ်). အင်ကြင်းပန်းဆိုပြီး အဖူးလေးတွေ အညိုရောင်ရင့်လေးတွေပေါ့နော်..တွဲလွဲဖြစ်နေတဲ့ပန်းလေးကိုပဲ မြင်ဖူးတယ်။ အင်ကြင်းပန်းမျိုးကွဲတခုထင်တယ်. မငုံ စိတ်ဝင်စားတယ်.ရှာဖွေလိုက်ဦးမယ်။
အဲဒါဆို မြန်မာပြည်မှာတွေ့ရတဲ့ အင်ကြင်းပန်းလို့ထင်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ပန်းရဲ့ အမည်ကဘာပါလည်း သိပါရစေ
အင်ကြင်းပင်လို့ အထင်မှားနေကြတဲ့ Cannon Ball tree ရဲ့ မြန်မာ အမည်ရင်းကို မသိပါဘူး။ ဒီအပင်က ရှေးကမြန်မာပြည်မှာ ပေါက်ခဲ့တဲ့ အပင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းခေတ်မှ သီရိလင်္ကာတွေက Cannon Ball tree ကို သာလ (sal tree)လို့ အမှတ်မှားပြီး တရိုတသေစိုက်ပျိုးလာရာကနေ၊ အင်တာနက် ခေတ်စားလာတော့ Cannon Ball tree ရဲ့ အနီရောင်ပန်းပွင့်ကြီးတွေကို သာလ (sal tree) လို့ တင်ကြ, ပြန်ကူးတင်ကြပြီး၊ နောင်တော့ မြန်မာတွေကပါ ဒါကိုပဲ အင်ကြင်းပန်းလို့ ထင်ကုန်ကြပုံရပါတယ်။